Ọgwụ ụmụ ahụhụ ezinụlọ
Onye na-ahụ maka uto osisi
Njikọ enyi na enyi
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka paraquat nwere ike ịbawanye
site admin na 21-11-24
Mgbe ICI malitere paraquat n'ahịa na 1962, mmadụ agaghị eche na paraquat ga-enweta ụdị ọnọdụ siri ike na nke siri ike n'ọdịnihu. Edepụtara ahịhịa ahịhịa sara mbara na-anaghị ahọpụta nke ọma na ndepụta ọgwụ ahịhịa nke abụọ kachasị n'ụwa. Mwụda ahụ bụụrụ ihe ihere n'otu oge...
Rizobacter na-ewepụta ọgwụgwọ fungicides nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ Rizoderma na Argentina
site admin na 21-11-19
Na nso nso a, Rizobacter weputara Rizoderma, biofungicide maka ọgwụgwọ mkpụrụ soybean na Argentina, nke nwere trichoderma harziana nke na-achịkwa nje fungal na mkpụrụ na ala. Matias Gorski, onye na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ n'ụwa na Rizobacter, na-akọwa na Rizoderma bụ ọgwụ na-agwọ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ.
Chlorothalonil na ihe na-echebe fungicides Chlorothalonil na Mancozeb bụ ọgwụ fungicides abụọ ahụ pụtara na 1960 ma TURNER NJ kọrọ na mbụ na mmalite 1960s. A na-etinye Chlorothalonil n'ahịa na 1963 site na Diamond Alkali Co. (mgbe e mesịrị ree ya na ISK Biosciences Corp. nke Japan) ...
Ụlọ ọrụ kemịkalụ 34 dị na Hunan mechiri, pụọ ma ọ bụ gbanwee na mmepụta
site admin na 21-10-21
N'October 14th, na mkparịta ụka akụkọ banyere mbugharị na mgbanwe nke ụlọ ọrụ kemịkalụ n'akụkụ Osimiri Yangtze dị na Hunan Province, Zhang Zhiping, onye osote onye isi ngalaba ngalaba nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ ozi, webatara na Hunan emechaala mmechi wee pụọ. .
Mmebi na ịchịkwa nduku akwukwo blight
site admin na 21-10-15
A na-akpọkọta poteto, ọka wit, osikapa na ọka dị ka ihe ọkụkụ anọ dị mkpa n'ụwa, ha na-etinyekwa n'ọnọdụ dị mkpa na mmepe akụ na ụba ọrụ ugbo nke China. Nduku, nke a na-akpọkwa poteto, bụ akwụkwọ nri nkịtị na ndụ anyị. Enwere ike iji ha mee ihe n'ọtụtụ ebe ...
ndanda na-eweta ọgwụ nje nke ha ma ọ bụ a ga-eji chebe ihe ọkụkụ
Ọrịa osisi na-aghọwanye ihe iyi egwu na mmepụta nri, na ọtụtụ n'ime ha na-eguzogide ọgwụ ndị dị ugbu a. Nnyocha e mere na Danish gosiri na ọbụna n'ebe a na-adịghịzi eji ọgwụ ahụhụ eme ihe, ndanda pụrụ izopụta ogige ndị na-egbochi nje ndị na-akpata ihe ọkụkụ n'ụzọ dị irè. Na nso nso a, ọ bụ di...
UPL na-ekwupụta mmalite nke ọtụtụ saịtị fungicides maka mgbagwoju anya ọrịa soybean na Brazil
site admin na 21-09-26
N'oge na-adịbeghị anya, UPL kwupụtara mwepụta nke Evolution, ọgwụ fungicides dị iche iche maka ọrịa soybean dị mgbagwoju anya, na Brazil. A na-ejikọta ngwaahịa a na ihe atọ na-arụ ọrụ: mancozeb, azoxystrobin na prothioconazole. Dị ka onye nrụpụta si kwuo, ihe atọ a na-arụ ọrụ "na-emeju onye ọ bụla ọzọ ...
Nkwenye ọhụrụ sitere na Ministri Ọrụ Ugbo nke Brazil
site admin na 21-09-13
Bill No. 32 nke Ministry of Plant Protection and Agricultural Inputs of the Secretariat for The Defense of Agriculture of Brazil, nke e bipụtara na Official Gazette na 23 July 2021, depụtara 51 pesticide formulations (ngwaahịa ndị ọrụ ugbo nwere ike iji). Iri na asaa n'ime nkwadebe ndị a dị ala-...
Otu nwanne nne ụlọ ahịa na Shanghai mere otu ihe
site admin na 21-08-30
Otu nwanne nne nke nọ na nnukwu ụlọ ahịa Shanghai mere otu ihe. N'ezie ọ bụghị ihe na-akụda ụwa, ọbụlagodi ntakịrị ihe: Gbuo anwụnta. Ma ọ dịla afọ iri na atọ anwụọla. Aha nwanne mama ahụ bụ Pu Saihong, onye ọrụ nke nnukwu ụlọ ahịa RT-Mart na Shanghai. O gburu anwụnta puku iri abụọ ka afọ iri na atọ gachara...
A ga-emejuputa ụkpụrụ ọhụrụ nke mba maka ihe mkpofu pesticide na Septemba 3!
site admin na 21-08-25
N'April nke afọ a, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, yana National Health Commission na General Administration of Market Supervision, wepụtara ụdị ọhụrụ nke National Food Safety Standard Maximum Residue Limits for Pesticides in Food (GB 2763-2021) (mgbe a...
Indoxacarb ma ọ bụ ga-apụ na ahịa EU
site admin na 21-08-20
Akuko: Na Julaị 30, 2021, European Commission gwara WTO na ọ tụrụ aro ka anabatakwa indoxacarb ọgwụ ahụhụ maka ndebanye aha ngwaahịa nchekwa osisi EU (dabere na EU Iwu Nchedo Ngwaahịa 1107/2009). Indoxacarb bụ ọgwụ ahụhụ nke oxadiazine. Ọ bụ fi...
Ijiji na-akpasu iwe
site admin na 21-08-09
Ijiji, ọ bụ ụmụ ahụhụ na-efe efe kacha ewu ewu n'oge okpomọkụ, ọ bụ onye ọbịa na-akpasu iwe na-adịghị akpọ ya na tebụl, a na-ewere ya dị ka ụmụ ahụhụ kachasị ruru unyi n'ụwa, ọ nweghị ebe a na-edozi ya ma ọ bụ ebe niile, ọ bụ ihe kacha sie ike iwepụ. Onye na-akpasu iwe, ọ bụ otu n'ime ihe arụ na ihe dị mkpa m ...
1234 Ọzọ > >> Peeji nke 1/4
Isi azụmaahịa gụnyere ọgwụ mgbochi ụlọ, ọgwụ pesticides, ọgwụgwọ anụmanụ, njikwa ijiji, API na etiti.